OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: May 2012
by myitkyina.blog.com on May 28, 2012
မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖေါ်ဆောင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်သည် မေလ(၂၆) ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ လူထုများ၊ တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများနှင့် တွေ့ ဆုံ၍ ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖေါ်ဆောင်ရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ ထိုတွေ့ဆုံသည့် အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက်လာသော လူထုများက ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွါး သော လက်ရှိအခြေ အနေများ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အဘယ် ကြောင့် မရရှိနိုင်ခြင်းကို အဓိကထား ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးတင်ပြ သော အကြောင်းအရာများမှ အချို့သောအနစ်ချုပ်မှာ -
(၁) ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် အားနည်းချက်များစွာပါရှိသည်။ တရားမျှတမှု မရှိ။
(၂) ကချင်တိုင်းရင်းသားများအတွင်း ပါဝင်သော လူမျိုးစုများကို သွေးခွဲမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ လီဆူ မျိုးနွယ်စု၊ ရ၀မ် မျိုးနွယ်စုတို့ကို ကချင်တိုင်းရင်းသားဝင်မှ သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မျိုးနွယ်စုရေးရာ ၀န်ကြီး သတ် မှတ်ပေးခြင်း။
(၃) ကချင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်းများကို နေပြည်တော်သို့သာ သယ်ဆောင်သွား ခြင်း၊ ပြည်နယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးချခွင့် မရှိခြင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်မှ ကျောက် ကုန်သည်များသည် ကျောက်စိမ်းကို နေပြည်တော်မှ တဖန် ပြန်လည်ဝယ်ယူနေရခြင်း၊ စီးပွါးရေးအခွင့်အရေးများ အားလုံး ကို နေပြည်တော်နှင့် နီးစပ်ရာအသိုင်းအ၀န်းများကသာ ထိန်းချုပ်ထားခြင်း။
(၄) ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ မရှိခြင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးသည် မူလတန်းပြ ဆရာတစ်ဦးကိုပင် အလုပ်ခန့်နိုင်သော အခွင့်အရေး မရရှိခြင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို နေပြည်တော်ကသာ ချုပ်ကိုင်ထားခြင်း။
(၅) ယနေ့ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးသည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ဟူ၍ဖြစ်သော်လည်း ယခု အထိ အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပါတ်သက်သည့် ဆောင်ရွက်မှု စိုးစဉ်းမျှ မတွေ့ ရှိရခြင်း။
(၆) ယနေ့ ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်မှာ ပြည်သူများ၏ တာဝန်မဟုတ်၊ KIA ၏ တာဝန် လည်းမဟုတ်၊ အစိုးရ သည် ကချင်ဒေသသို့ စစ်တပ်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် တပ်အင်အားတိုးချဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အဟန့်အတားဖြစ်နေ၊ အစိုးရတွင် သာ လုံးဝတာဝန်ရှိခြင်း။
(၇) အစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် စစ်တက္ကသိုလ်၊ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်းများ၊ အဆင့်မြင့် သင်တန်းကျောင်းသို့ တိုင်းရင်းသားများ ၀င်ခွင့်မရရှိခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူများ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေခြင်း။
(၈) ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရသည်နှင့် ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွင် ရန်ကုန်အစိုးရဟူ၍ သာ ကျန်ရှိစဉ် ကာလ၊ မြန်မာပြည် ချောက်ထဲထိုးကျမည့်အချိန်တွင် ဆမားဒူဝါဦးဆောင်သော ကချင် သေနတ်ကိုင်များ ၀င်ရောက်ကယ်တင်ခဲ့သည့် သမိုင်းကို ဖျောက်ဖျက်ထားခြင်း၊ ကချင် တိုင်းရင်းသား များသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တည်တံ့စေရေးတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍ တွင် တာဝန်ယူခဲ့ သည်ကို ဖျောက်ဖျက်ခံနေရခြင်း။
(၉) နိုင်ငံအကျိုးကို အမှန်တကယ်သယ်ပိုးမည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း မပြု ဘဲ၊ စီးပွါးရေးအမြတ်ရှာသူများ၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်သူများ ကိုသာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထား ခြင်း။
(၁၀) KIO နှင့် အစိုးရအကြား ပြဿနာကို ကိုင်သွယ်ဖြေရှင်းရန် ကြားခံအဖွဲ့အစည်း မရှိမနေ လိုအပ် နေခြင်း။
(၁၁) အစိုးရသည် တပ်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် KIO ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေသော်လည်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်အားလုံးနှင့် အစိုးရဌာနအားလုံး (မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အပါ အ၀င်) ကို KIO အဖွဲ့မှ ပို့လွှတ်သော မလိရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားကိုသာ အသုံးပြုနေရ ခြင်း၊ KIO အဖွဲ့အပေါ် ထားရှိ သော လူထု၏သဘောထားကို ခန့်မှန်းသိရှိရန် လိုအပ်ခြင်း။
(၁၂) ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖေါ်ဆောင်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားအရေးကို ဖယ်ရှောင်ထား၍ မဖြစ် နိုင်ခြင်း၊ ပင်လုံစာချုပ်၊ ပင်လုံကတိက၀တ်ကို ဖျောက်ဖျက် မျက်ကွယ်ပြုလျှင် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေးကို မည်သည့်အခါမှ ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း။
အထက်ပါ တင်ပြချက်ကို ဆွေးနွေးသူများထဲတွင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းဟောင်းများ၊ ဥပဒေအရာထမ်းများ၊ လက်ရှိပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင်ပြမှု သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နှစ်ပေါင်း(၅၀)ကာလအတွင်း ယခုအကြိမ်သည် ပထမဦးဆုံး ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း တင်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တင်ပြမှုပြင်းထန်သဖြင့် အခမ်းအနားမှူး ဆောင်ရွက်သူသည် တင်ပြမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ သတိပေး ဟန့်တား မှု ပြုခဲ့သော်လည်း၊ ဦးသိန်းဇော်မှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ပြရန် ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 8:58 AM No comments:
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 7:36 AM No comments:
Thein SeinaHpaji Jaw Hpung Council Nnan hpaw ninghtan hkyen
Social Economic Development Advisory Council ???
Myen Gumsan Thein Sein hpe Social/Well fair, Economic hte Technology bungli lamang ni hte la-kap nhtawm tang du du hpaji jaw galaw sa wa lu na matu ninghkring marai (15) shang lawm ai, Social Economic Development Advisory Council ngu ai hpaji jaw hpung langai hpe hpaw ningthan mat wa na re lam Asuya hte ni nawn ai shiga dap ni kaw na chye lu ai, ndai council hta myi shawnge2011 ning hpaw ninghtan tawn ngut sai Myen Gumsan Thein Sein hpe Politic, Economic hte Legal bungli ni hte seng nhtawm hpaji jaw salang marai(9) lawm ai hpung hte gara hku matut galaw sa wa na hpe nchye lu shi ai zawm ndai marai(15) hta kachyi kapu yawm wa mai ai zawn langai/lahkawng mung bai jat bang wa mai na re lam hpe mung matut chye lu ai.
Dai hpaw shabawn hkyen nga ai hpung malawm ni ngu ntsa lam lata san tawn ai mying hte bungli ni gaw lawu na hte maren rai nga ai.
1. ဦးမော်သန်း(ယခင် ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်) နာယက
2. ဦးတင်ထွဋ်ဦး ဥက္ကဋ္ဌ
3. ဒေါ်ခင်စမ်းရီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ
4. ဦးဆက်အောင်(သမ္မတရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေး) အတွင်းရေးမှူး
5. Dr. ကျော်ရင်လှိုင်(Hong Kong City University) တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး
6. ဦးတင်မောင်သန်း(Myanmar Egress) အဖွဲ့ဝင်
7. ဦးဝင်းအောင်(ကုန်သည်/စက်မှု အသင်းချုပ်) အဖွဲ့ဝင်
8. ဦးလှမောင်ရွှေ( ကုန်သည်/စက်မှု အသင်းချုပ်) အဖွဲ့ဝင်
9. Dr. ဇော်ဦး(ဗဟု ဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့-Thailand) အဖွဲ့ဝင်
10. ဦးသီဟန်မျိုးဥာဏ်(ဥပဒေပညာရှင်) အဖွဲ့ဝင်
11. ဦးကိုကိုကြီး(ဒိုင်းမွန်းစတား ကုမ္မဏီ ပိုင်ရှင်) အဖွဲ့ဝင်
12. ဦးသောင်းတင်(KMD) အဖွဲ့ဝင်
13. Dr. သန့်မြင့်ဦး(U Thant’s grandson) အဖွဲ့ဝင်
14. ဦးမိုးကျော်(MMRD) အဖွဲ့ဝင်
15. ဦးသန်းလွင်(ကမ္ဘောဇဘဏ် - ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) အဖွဲ့ဝင်
16. ဦးခင်မောင်အေး( CB Bank) အဖွဲ့ဝင်
17. Prof. ဦးအောင်ထွန်းသက် အဖွဲ့ဝင်
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:34 AM No comments:
Letter to Burmese President Thein Sein from Kachin Culture Committee(in Burmese)
Kachin Culture Committee Letter
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:46 AM No comments:
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:24 PM No comments:
The 12 point agreement
23 May 2012 14:47 S.H.A.N News - Shan Herald Agency for News
Union level Peacemaking Work Committee (UPWC) – Restoration Council of Shan State / Shan State Army (RCSS/SSA)
Note The official version deals with military maters in several pages. Even SHAN editor, who was there asaconsultant, has not been givenacopy of it. The following therefore isagist, not word by word translation, of the agreement. It there is any mistake, the blame is SHAN’s alone.
2. The two sides will conductajoint field survey
(6) LANG NGU NA JINGHPAW WUNPAWNG AMYU SHA HPUNG AGINJAW HKUMRA ZUPHPAWNG NDAU LAIKA
Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha Hpung Ginjaw Hpawng Ndau Laika-21st May 12
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:21 PM No comments:
This short documentary film is about the atrocities committed by brutal Burmese regime in Kachin Land Northern Burma. The war sparked in June 9, 2011 when Burmese government troops broke the 17 years ceasefire agreement with Kachin Independent Army.
မြန်မာအစိုးရ တပ်ဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ KIA ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ အပေါ်ကို ထိုးစစ်ဆင်တာတွေကို ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ရပ်တန့်ပေးဖို့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 7:49 AM No comments:
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် ကချင်လူမျိုးစု လီဆူအမျိုးသမီးတဦးအား ရူးသွားသည် အထိ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့် ရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှု ပြုလုပ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ(၁)ရက်နေ့တွင် ချီဖွေမြို့နယ်၊ လုပီရွာမှ လီဆူအမျိုးသမီး ဒေါ်ဂွာမလေး၊ အသက် (၄၈)နှစ်၊ ကလေး(၁၂)ယောက်၏ မိခင်အား အစိုးရစစ်သားများမှ ဘုရားကျောင်း အနောက်ဘက်တွင် ပုန်းအောင်းနေစဉ် ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး စုပေါင်း အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြပါသည်။ သူမနှင့်အတူဖမ်းဆီးမိ၍ ပေါင်နှင့် ပါးပြင်တွင် ဓားမြောင်ဖြင့် ထိုးဖောက်ခံခဲ့ရသူ ဦးရိုးတဂွေးဆိုသူက ဒီလိုပြောပြရှာပါတယ်။ “ကျနော် တွေ့ခဲ့တာကတော့ ဒေါ်ဂွာမလေး ကို စစ်သား(၁၀)ယောက်လောက်က ၀ိုင်းထားပြီး သူမ ခန္ဓာ ကိုယ်မှာ နေရာမရွေး တယောက်ချင်းစီ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ဒုတ်နဲ့ရိုက်သူကရိုက်၊ သေနတ် နဲ့ထုသူကထု၊ ဓားမြှောင်နဲ့ ထိုးသူကထိုး၊ ခေါင်းမှာသေနတ်ဒင်နဲ့ ရိုက်သူကရိုက် လုပ်နေကြ တာကို ကျနော့ကို ချည်ထားတဲ့ မလှမ်းမကမ်းနေရာကနေ နေရ တာပါ။ သူမ အော်ငိုတော့ ထပ်ရိုက်ကြတယ်။
သူမလဲကျသွားတော့ ဓားမြှောင်သေးသေးလဲနဲ့ ပြန်ထိုးကြတယ်။ နောက်တော့ အ၀တ်အစားအကုန် ချွတ်ပေးလိုက်တာတွေ့တယ်။ စစ်သားတွေက သူမကိုဝိုင်းရံထားပြီး တချို့က ထိုင်လိုက်ထလိုက်နဲ့ ရှုပ်နေကြတယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်ကြတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆက်ဆံနေတာ ကျနော်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မမြင်ရပေမဲ့ ဒေါ်ဂွာမလေးက တအားအော်ဟစ် ငိုယိုရှာပါတယ်။ အ၀တ် အစားအကုန်ချွတ်ပေးပြီး ယောင်္ကျားသားတွေ ၀ိုင်းထားတယ်ဆိုတာ ၀ိုင်းကြည့်ရုံတော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ပြီး ကျနော်သိတယ်။ စစ်သားတွေက ဒေါ်ဂွာမလေး ကို အဲသလိုဝိုင်း လုပ်နေချိန်မှာ စစ်သားတွေက ကျနော့ကိုလဲ စပြီးနှိပ်စက်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့်ကျနော်လဲ သတိလစ်တချက် မလစ်တချက်ဖြစ်လာနေရင်းက မြင်နေရတာပါ။ သူမတအားအော်ငိုရှာတယ်။ အော်ငိုတော့ ပါးရိုက်တယ်။ ပစ်သတ်မယ်လို့ပြောသလား မသိဘူး၊ သေနတ်နဲ့ချိန်ရွယ် ထိုးနှက်ကြ ပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဂွာမလေး မေ့လဲသွားတာ ကျနော်တွေ့ခဲ့တယ်။ ဗမာစစ်သားတွေက ကျနော့ကို သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်။ သူတို့မေးတာ ကျနော် ဘာမှနားမလည်ဘူး။ ကျနော်က ဗမာစကားတတ်ဘူး။ သူတို့ပြောတာကိုနားမလည်လို့ ကျနော်ဘာမှပြန်မပြောတတ်တော့ လဲ ကျနော့ခေါင်းကို သေနတ်ဒင်နဲ့ အားကုန်ထုပေးကြတယ်။ ညာဘက်ပါးစောင်းနဲ့ နံရိုးတွေမှာဓားနဲ့ ထိုးကြတယ်။ ကျနော့ကို သစ်ပင် မှာချည်တုတ်ထားတယ်။ တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့လာပြီး တုတ်နဲ့ရိုက်လိုက်၊ ကန်ကြောက်လိုက်၊ ပါးရိုက်လိုက်၊ သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး လှံစွပ်နဲ့ထိုးလိုက် လုပ်ကြတယ်။ ကျနော့ကိုရော၊ ဒေါ်ဂွာမလေးကိုရော (၃)ရက်တိတိ ထမင်းလဲမကျွေး၊ ရေလဲ မတိုက်ကြပါဘူး။ ကျနော့ကိုတော့ နေ့ရော၊ ညရော ချည်ထားကြတယ်။ ဒုတိယနေ့မှာ ကျနော့ကို ထပ်ပြီးနှိပ်စက် စစ်ဆေးကြတော့တာ ပါပဲ။ စစ်သားတဖွဲ့ရောက်လာပြန်ကာ သတ်ပစ်မယ်လို့ပြောတာ ထင်တယ်၊ ကျနော့ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားကြပြီး တယောက်ကတော့ ကျနော့ရဲ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်လည်မှာ ဓားမြှောင်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပါ တယ်။ မခံနိုင်လို့ ကျနော်အော်ငိုပါတယ်။ အော်ငိုတော့ ထပ်ပြီးထိုးပြန်တယ်။ ဒီလိုအော်ငိုလေ ထပ်ခါထပ်ခါထိုးလေ လုပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ပေါင်တဖက်ပေါက်သွားအောင် ထိုးထည့်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ သွေးတွေ အလိမ်း လိမ်းဖြစ်နေပါပြီ။ ခေါင်းကိုလဲသေနတ်နဲ့ ထုထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ကျနော်သတိမေ့သွား ပါတော့ တယ်။ ကျနော် သတိလည်လာချိန်မှာ ဗမာစစ်သားတွေ မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်နဲ့ သိပ်မလှမ်း မကမ်း မှာတော့ အ၀တ်ဗလာပေါ် အ၀တ်နည်းနည်းဖုံးထားပေးပြီး သွေးတွေ၊ မစင်တွေနဲ့ပေကြံလျှက် သတိ မေ့မျှောနေတဲ့ ဒေါ်ဂွာမလေးကိုတွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်မထနိုင်ဘူး။ သတိလည် တချက်၊ မေ့ တချက် ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီဘုရားကျောင်းနားမှာ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် သတိမေ့မျှောနေချိန်မှာ NDA (K) (နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ)မှ စစ်သားမှာ တွေ့ ပြီး ပန်ဝါဆေးရုံကို ပို့ပေးကြပါတယ်။
ပန်ဝါဆေးရုံမှာလဲ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးက ရှေ့တန်းက ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကို ပြုစုစောင့် ရှောက် တာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတော့ ကျနော့ကို ကောင်းကောင်း ဂရုမစိုက် နိုင်ကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လီဆူ ဆွေမျိုးတွေက တရုတ်ပြည် နယ်စပ်ဆေးရုံမှာ ဆေးသွားကုဖို့အတွက် ခေါ်ထုတ် သွား ကြပါ တယ်။ ကျနော်နဲ့ ဒေါ်ဂွာမလေး (၃)ရက်လုံးလုံး လုပီးဘုရားကျောင်းနားမှာ မေ့မျှော နေခဲ့ကြတာပါ။
ကျနော့အမျိုးသမီးတော့ ကိုယ်တပိုင်းသေနေတဲ့ လူနာပါ။ စစ်သားတွေဝင်လာချိန် ကျနော့ကို ဖမ်းသွား ပြီး ကျနော့ရှေ့မှာတင် ကျတော့ဇနီးကို အိမ်အပြင်ကို ပစ်ထုတ်လိုက်ကြတယ်။ ကျနော့ဇနီး တော့ သေသွားပြီ ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်သက်သာလာရင် ကျနော့ဇနီးကို လိုက်ရှာချင်သေး တယ်။ ကျနော်တို့ (၂)ယောက်မှာ ကလေးမရှိဘူး။ တယောက်ပဲရှိတာ ဆုံးသွားပါပြီ။”
ဘာကြောင့် ကျနော်တို့ကို ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတာ သူတို့ပြောတဲ့စကားကလဲ နားမလည်တော့ခက်တယ်။ ကျနော့အထင်တော့ သူတို့ ကျနော်တို့ကို ကေအိုင်အေနဲ့ မသင်္ကာလို့ဖြစ်မယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရွာသားတွေက ရိုးရိုးသားသားပဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတာပါ။ ဘယ်သူနဲ့မှ ရှုပ်ရှုပ် ရှက်ရှက်တော့ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်လဲ မသိတော့ဘူး။”
ဒေါ်ဂွာမလေးကတော့ ယခုအချိန်တွင် စိတ်ဒဏ်ရာဆိုးဆိုးဝါးဝါး အနာတရဖြစ်သွားပြီး လူတွေကို ကြောက် လန့်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ စကားလဲမပြောတော့ပါ။ စိတ်ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ စသည့်လက္ခဏာများ တွေ့ရသဖြင့် မိသားစု၊ ဆွေမျိုးများက စိတ်အထူးကုဆေးရုံသို့ပို့ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ဒေါ်ဂွာမလေး၏ခင်ပွန်း ငွါးဆာကတော့ “အစတုန်းက အကောင်းကြီးပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အခုတော့ ဘာမှမေးလို့မရ။ ဆွေးနွေးလို့လဲ မရတော့ဘူး။ အိပ်ပြန်ချင်တယ်။ တခုပဲပြောပါတယ်။ ကျနော် အရမ်း ၀မ်း နည်းတယ်”လို့ မျက်ရည်ဝဲပြီး ပြောရှာပါတယ်။
ဒါတွေဟာ လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်၊ ချီဖွေမြို့နယ်အတွင်း လွန်ခဲ့တဲ့ မေလ(၁)ရက်နေ့မှစပြီး အစိုးရ တပ်မတော်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် NDA(K) တို့နှင့် ကေအိုင်အေတပ်များကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲ တွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် လာသည့် ဒုက္ခသည်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေ လက်တွေ့ ခံစား နေကြရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေပါ။ နာကြည်းမှု၊ မုန်းတီးမှုတွေ သံသရာလည်ရင်း မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစပျောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်စွာဖြင့် စုံစမ်းတင်ပြ အပ်ပါသည်။
အချက်အလက်များ- ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံးမှ ဖြစ်ပါသည်။
Agence France-Presse | Updated: May 17, 2012 22:38 IST
Washington: President Barack Obama on Thursday extended the US sanctions against Myanmar, warning that despite progress on human rights and governmental reform,apolitical opening in the country remained "nascent."
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:46 PM No comments: